About Us - Like Valve (Tianjin) Co., Ltd
Esilucwecwana futhi lug Uhlobo BV
Ukulwa Komlilo BV
I-Flange Butterfly Valve
Umhubhe wevemvane we-Eccentric
Hard uphawu esangweni valve
Soft valve esangweni valve
Amanzi Control Valve
Thanda Valve (Tianjin) Co., Ltd kuveza e Tianjin - emnothweni ashukumisayo kakhulu enyakatho yeChina. Thanda umphini kuyinto ephezulu imikhiqizo valve Manufacturing Inkampani esesikhundleni ucwaningo kweluhlaka, ukukhiqiza, izinsiza ukumaketha kwelinye. Sine-Independent R & D isikhungo, eziphambili yokukhiqiza ubuchwepheshe kanye ngokuqinile ukusebenza amazing olufanele ngamazwe. Nge eziphambili ubunjiniyela design izindlela, evuthiwe imishini yokukhiqiza, ukuhlolwa izindawo yokuqinisekisa kanye nomqondo ukukhiqizwa mafutha, thina "Thanda Valve" ukuqinisekisa ukuthi ingxenye ngayinye kuwo wonke umkhiqizo senza Supply ungaphakathi high kanye nokusebenza.
Kuzokuqinisekiswa ikhwalithi livela ekuphathweni yonke imininingwane. Kusukela kusungulwa yayo, inkampani uye bamukela umklamo abasizwa-computer, njengemishini CAD nemisebenzi okuqinile, futhi owokuqala ukwethula okuphathwa Six Sigma. Umi iqoqo esiqinile indlela yokuphathwa kwamazinga, qhubeka Ukuze siphishekele zero imikhiqizo isici. We ngokukhethekile butterfly valve, isango valve, imbulunga valve, isheke valve, ibhola valve, wokubacindezela ukulawula valve, kulinganisa valve kanye neminye imikhiqizo chungechunge. Kubuye kwenze sibe isakhiwo valve e ngezinto ezahlukene, ingcindezi, usayizi kanye neminye imikhiqizo, kunezinhlobo ezingaphezu kuka-50 ochungechungeni, ngaphezu 1,200 izinhlobo.
Thanda Valve (Tianjin) Co., Ltd
izinga uhlelo isiqinisekiso
I-annual ukukhiqizwa nomthamo amathani angaphezu kuka-6,000. Imikhiqizo zasitshekelwa zonke izingxenye zezwe bese zithunyelwa eYurophu nase-United States nakwamanye amazwe, ezisetshenziswa kakhulu kwamanzi nokuthuthwa amanzi, ukwakhiwa, ugesi, Petrochemical, Metallurgical kanye nezinye izimboni. Umkhiqizo ukukhalipha, high ngemali ephansi, omethembayo ngumsebenzisi.
Sesidlule ISO9001 ngamazwe isitifiketi izinga uhlelo, Njengazo Valve ine omuhle kakhulu ezinkulu kanye naphakathi umshini processing imishini 178 amasethi, 32 amasethi ukuhlolwa amazwe ezazivela ngaphandle. Umklamo womkhiqizo inoveli, isakhiwo eziphambili, oncomekayo ukukhiqizwa ubuchwepheshe, ukukhiqiza mafutha, ukuthola ephelele. I kokulawulwa esiqinile ikhwalithi uhlelo kanye nohlelo lokuphatha oluseqophelweni, sesifike ezingeni eliphakeme design, ukuthuthukiswa, ekukhiqizeni ngamanani amancane kanye nokuhlolwa test. umthamo Namandla ukukhiqizwa kwenza "Like umphini" e esikhathini esifishane ukunikeza imikhiqizo, futhi unikeze emva-sales service Esifike Ngesikhathi nephumelelayo sifinyelele esiphezulu ukwaneliseka amakhasimende.
Ngokuzayo iyokwakhiwa kusukela namhlanje, Njengazo Valve kuyoba ukuba unqambothi emisha engokwesayensi neyezobuchwepheshe, inkonzo unqambothi, izinga toop umoya ebhizinisi ukubamba iqhaza ukudalwa esizayo. Nge ikhwalithi yemikhicito nokwaneliseka ikhasimende ukuba balolonge ibhizinisi lethu Inkampani yethu, Nge ukuphishekela wenkuthalo nokuthuthukiswa okuqhubekayo ngaphezu thina. "Likv iphupho" uzokwenza "iphupho Chinese" okuningi okuthakazelisayo!
I-H12, iTengfei Base, iXiaozhan Ind. Indawo, iJinnan Dist., Tianjin, China (Mainland)
Izinzuzo nobubi be-v ehlukahlukene ...
Umbiko: Ukuxhuma okusha kwemishini ...